1. Uyenza njani i-French toast enuka kamnandi, emnandi, indibaniselwano egqibeleleyo. Kuyamangalisa kangangokuba awukwazi ukuyeka ukutya
2. Ithowusti yaseFrance, okanye yaziwa nje ngokuba sisonka esifakwe iqanda, kwisitayile esityebileyo sasentshona. Onokuthi uyile kwiidessert ezimnandi Enokuhanjiswa ethekweni Iqela okanye njengokutya Ukuyifaka njengesidlo sakusasa esidliwayo kunye nobisi, iti okanye ikofu, kwaye inokwenziwa nedessert yolwamkelo nasemva kwemini. Yintoni enokukuxelela ukuba i-toast yesiFrentshi kulula ukuyenza, kwaye ukuba ihonjiswe ngesiqhamo esitsha, iya kongeza Ixabiso lesondlo Ngokupheleleyo Kwaye xa usityiwe, uziva uhlaziyekile kwaye unamandla. I-Toast yesiFrentshi nayo kulula kakhulu ukuyenza. Nokuba awulunganga ekuphekeni Kwaye akukho nzima ukulungiselela izithako Unokuthengwa kwimarike Ivenkile yomnyango Okanye iivenkile ezilula nazo Ukuba silungile, masilungiselele izinto eziluhlaza zeFrench Toast Berry. Inkqubo yokulungiswa kwemveliso eluhlaza ngolu hlobo lulandelayo
3. 2 izilayi zesonka esityebileyo
5. 1 indebe yobisi olutsha
6. Ingca yetyuwa yencasa emnandi ngakumbi.
7. Iziqhamo zeberry ezifana neeblueberries, amaqunube, okanye naluphi na uhlobo lweziqhamo.
8. 1 ibhanana
9. Sithandwa, ngokokungcamla kwakho
10. Ibhotolo encinci engenasityu
11. Lungisa izithako Emva koko uthele ubisi olutsha kunye namaqanda kwisitya. Yongeza ityuwa encinci kwaye ubethe ukudibanisa, okanye ungasebenzisa umxube.
12. Dipha isonka kwiqanda elibethiweyo kunye nobisi kumacala omabini, emva koko shushu ipani kubushushu obuphantsi kwaye ungeze ibhotolo encinci, okanye malunga ne-10 gram. Yijike wenze isonka segolide kunye nevumba kumacala omabini.Xa isonka silungile, sibeke ecaleni wenze esinye.
13. Emva koko faka ibhotolo encinci epanini. Emva koko usike ibhanana kwiiglasi kwaye usose nebhotolo Yeyiphi ngale ndlela eya kwenza ibhanana ibenomdla ngakumbi
14. Emva koko, beka zombini izilayi zesonka kwipleyiti. Ihonjiswe ngamaqunube Ukuze ube mhle, beka ibanana ejikeleze isitya kwaye uthule ubusi njengoko unqwenela. Yiyo ke loo nto, isepha yaseFrance igqityiwe.
15. Unjani Ngendlela yokwenza isonka saseFransi esinokwenziwa ngokulula, ndingatsho ukuba simnandi kakhulu. Kwaye imenyu yokwamkela iindwendwe Luxurious ngezinto ekrwada ekulula ukuzifumana Kule holide, masenze i-toast yesiFrentshi ukuze usapho okanye abahlobo batye kunye, uya kuba likhoboka lobumnandi. Kwaye yimenyu yoyilo efanelekileyo elungele wonke umntu